Yakaomarara Candy Kuumba Muchina Kutengesa | Yinrich
Runhare ｜ WhatsApp ｜ Wechat: +8613801127507, +8613955966088 Email: sale@yinrich.com info@yinrich.com
Lollipop Kugadzira Line
Lollipop Kubvisa Line
Flat Lollipop Die-kugadzira & Kuputira Machine
Lollipop Die-Anoumba Line
Jelly Candy Kugadzira Line
Jelly Mogul Muchina
Jelly Candy Kubvisa Mutsara
Bhabhurigamu & Bubble Gum Mutsetse
Mutsamiro Type Chewing Gum Line
Chocolate richigadzirisa Line
Chocolate Enrobing Muchina
Yakaomarara Candy Kugadzira Line
Yakaomarara Candy Kubvisa Line
Yakaomarara Candy Inofa-yekuumba Line
Auto-kuyera Sisitimu (aws)
Mutete Firimu Mubiki (bm)
Inoenderera Jelly / marshmallow Cooker (cjc)
Kutonhora Bhandi (scb)
Rotor Mubiki (rt)
Yakazara Vacuum Cooker (tc)
Kukurumidza Kuparadza Sisitimu (rds)
Batch-huchenjeri Vacuum Kubika Chikwata (bjc)
Bhisikiti Kuzadza Muchina
Marshmallow Kugadzira Line
Yakaiswa Marshmallow Line
Yakawedzeredzwa Marshmallow Line
Lentil Kugadzira Line
Macaroon Kuzadza Uye Capping Machine
Toffee & Chewy Candy Kugadzira Mutsara
Tofi Inoisa Line
Chewy Candy Cheka Uye Kuputira Machine
Soft Candy Die-Anoumba Line
Kubata Mushure meKutengesa & Waranti
Imba > Zvigadzirwa > Yakaomarara Candy Kugadzira Line > Yakaomarara Candy Inofa-yekuumba Line
yakaoma candy kufa-yekuumba mutsara
ndeye yepamusoro furuu inogadzira yakaoma zvihwitsi kugadzira muchina, iyo inoshandiswa kuburitsa yakakwira-kufashaira mafuru kuumba yakaoma zvihwitsi. Iyo yakaoma zvihwitsi kufa-yekuumba tambo chishandiso chakazara chekugadzira ese marudzi esipi akaoma. Kuenderera mberi kwekubika bota yekubikira kunogona kuvimbisa mhando yesiraidhi, uye yakaumbwa sirasi ndiyo nzira iri nani yekugadzira akasiyana maumbirwo emakese.
Yinrich akaoma zvihwitsi kufa-kugadzira mutsara mugadziri. Tine hupfumi hwekugadzira ruzivo mukugadzira maindasitiri ekugadzira zviwitsi uye timu yehunyanzvi yematarenda. Iyo yakaoma zvihwitsi kufa-yekugadzira mutsara inogadzirwa naYinrich inonyanya kukodzera kuumba yakaoma zviwitsi nemhando dzakasiyana dzeyakaoma zviwitsi uye michero zvihwitsi. Yedu yese yemuchina wedu wekudhinda zvihwitsi michina yakagadzirirwa zvichibva kune yekumberi tekinoroji tekinoroji uye nedzimwe nyika nzira dzekugadzirisa.
Yakaomarara zvihwitsi kufa-kugadzira mutsetse
YINRICH's TG akateedzana anoshandiswa kugadzirwa kweakakwira akabikwa kufa-akaumbwa akaomarara macandi. Iko kugona kwekugona kunogona kubva pa200kgs / h kusvika 3000kgs / h.
Yakaomarara pipi yekuisa mutsara weyakajeka candy
Yakaomarara zvihwitsi kufa-inogadzira tambo ine batch kubika
Yakaomeswa pipi kufa-yekuumba tambo ine batch kubika